Omenala Uwe emere, karama Vodka, Karama Whiskey - Chengfeng
Omenala Design Bottles
Obere Iwu Obere
Igwe Igwe Highball
Ihe eji achọ mmanya
Igwe iko anyị na-etinye aka na ndụ dị ọcha ma dị ọcha!
Gbọ njem ụgbọ mmiri, ịdị n'otu na ọganihu, eziomume na irite uru ọnụ, nnara ọrụ!
Iji ghọọ ndị ọrụ ụlọ ọrụ pilot nke n'etiti-elu ọgwụgwụ glassware customization, na-eme ka a dị iche na ahaziri customized, na-eme ka anyị ụdị bara uru karị!
Igwe ihe eji eme elu
750ml mmanya karama
Anyị na-elekwasị anya na imepụta na imepụta ụdị iko karama mmanya site na nkọwa zuru ezu gị. Ogologo karama mmanya karama site na karama mmanya karama 50ml ka 1.5L, na nhọrọ n'etiti okpu, ịghasa elu, na corks, pụtara na ị nwere ike ịhazi karama mmanya mmanya pụrụ iche maka akara gị na obere usoro.
750ml karama mmanya karama
Cochọ mma firing, decaling, silk ihuenyo ebi akwụkwọ, etching, sandblasting, osise, na agba mkpuchi, iko frosting, pate-surpate, guputa na gold na glaze spraying.
300ml Mmanya Mmanya
Stemless Aerating Wine Glass na-eweta arụmọrụ na isi ihe na - ewu ewu na iko mmanya. Emebere ya kpam kpam, arịa a na-achọpụta nke ọma na-enye ụzọ pụrụ iche pụrụ iche ma dị mma iji belata mmanya ma ọ bụ mmụọ gị. Wunye ya n'ime sel aeration nke etinyere n'ime etiti iko ahụ. Mmanya ahụ ga-agbanye, na-akpata 7oz nke mmanya aerated nke dị njikere iji mee pallet gị obi ụtọ. Jiri a ngọngọ nke ice na aerator ka ajụkwa mmanya na-acha ọcha, wiski, ma ọ bụ cognac ka ha aerate. Na-asacha efere mma.
Guangzhou ChengFeng Brothers Industrial Company Limited bụ otutu enterprise ọkachamara na n'ichepụta, emebe na nnyocha nke n'etiti-elu ọgwụgwụ glassware. Productdị ngwaahịa anyị gụnyere iko mmanya na-akwado nkwado iko, iko karama mmanya, karama mmiri, iko iko, na ngwaahịa ndị ọzọ na-enyo enyo.
Companylọ ọrụ anyị dị na Guangzhou China, yana okporo ụzọ dị mfe na ngwa ngwa ngwa ngwa, ị nwere ike ịhọrọ n'etiti ụgbọ okporo ígwè, ikuku, akpa mmiri na njem ala. Ọnọdụ anyị dị nso na ọdụ ụgbọ mmiri Huangpu na Nansha, enwere ike ibuga ngwongwo gaa n'akụkụ ụwa niile site na igbe. Anyị na-agba mbọ ike ụwa klas ọhụrụ ụdị na n'etiti-elu ọgwụgwụ glassware ụlọ ọrụ na ọkachamara otu, dị ike management na ụlọ ọrụ ịsụ ụzọ na akụrụngwa.
Nke 1, Jiuji Street, Caotang Village, Nancun Town, Panyu, Guangzhou, Guangdong, China